Caalamka Online » WAR DEG DEG AH: Warkii ugu dambeeyey oo hada kasoo kordhay Jiidaha Dagaalka & Taliya Ciidamada Puntland oo ka hadlay Khasaaraha + Ciidamada Somaliland oo laga saarayo….
WAR DEG DEG AH: Warkii ugu dambeeyey oo hada kasoo kordhay Jiidaha Dagaalka & Taliya Ciidamada Puntland oo ka hadlay Khasaaraha + Ciidamada Somaliland oo laga saarayo….
Wararkii ugu dambeeyey ee haatan ka imaanaya deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa sheegaya in uu is taagay dagaalkii u dhaxeeyey ciidamda Puntland iyo Somaliland.
Taliyaha ciidanka kumaan doosta Puntland Korneyl Jimcaale Jaamac Takar oo aan goor dhoweyd khadka Telephone-ka kula xidhiidhnay ayaa Nooga Waramay qaabka uu dagaalkaasi u dhacay iyo khasaaraha ka dhashay, waxaana uu sheegay taliyuhu in aanu jirin khasaare kasoo gaadhay dhinacooda dagaalkii dhex maray ee Puntland iyo Somaliland, wallow ciidanka Puntland laga soo saaray saldhigoodii labada ciidana ay iminka kala fadhiya duleedka magaalada Tukaraq.
Taliyahay ayaaa xaqiijiyay in Mgaalada hada ay la wareegeen Ciidamada Somaliland oo saakay weerar ku soo qaaday Fadhiisimaha Ciidanka Puntland.
Taliye Jimcaale ayaa dhanka kale xusay in uu jiro khasaare xoogan oo ay gaadhsiiyeen ciidamada Somaliland, waxaana uu sheegau in duulaanka ay lahaayeen iyagu balse waxyeelo culusna uu kasoo gaadhay dagaalkaasi.
Inkastoo khasaaraha dhabta ah ee soo kala gaadhay labada ciidan aanan lahayn war rasmi ah oo tibaaxaya xaqiiqada dhabta ah hadana waxa uu ku hanjabay taliye Jimcaale in ay jawaab ka bixin doonaan saacadaha soo socda weerarka gaadmada ee ay kusoo qaadeen ciidamada Somaliland deegaankaasi Tukaraq ee gobolka Sool.
Waxaa ka kacsan Maanta Xaalada deegaanka Turaraq ee Gobalka Sool waxaana saacad kasta la filan karaaa in uu dib ubilaaawdoDagaalka Udhexeeyo labada Maaamul.